Ciyaartoyda Israa'iil oo loo diiday dal-ku-galka Sacuudiga - BBC News Somali
Ciyaartoyda Israa'iil oo loo diiday dal-ku-galka Sacuudiga
Xiriirka ciyaaraha jarta miiska ama qamaarka ee Israa'iil ayaa magdhow dalbanaya ka dib markii ciyaartoydooda loo diiday in ay galaan Sacuudiga.
Dalka Sacuudiga oo martigelinaya tartanka jarta miiska ama qamaarka waxaa loo arkaa mid boqortooyada u furfuraya qeybaha kale ee caalamka. Laakiin ciyaartoyda Israa'iil waxaa loo diiday dal ku galka sacuudiga ee Visa-ha.
Afhayeen u hadashay Sacuudiga oo lagu magacaabo Fatimah Baeshen, ayaa sheegtay in ciyaartoyda Israa'iil aanan la siin karin dal ku gal, maadaama labada dhinac uusan ka dhexeyn xiriir diblumaasiyadeed.
Balse Israa'iil waxay aaminsan tahay in ay qasab ahayd in ciyaartoyda loo ogolaado dal ku galka. Ciyaartoyda Israa'iil ee loo diiday visa-ha Sacuudiga waxay gaarayeen illaa todobo.
Gudiga ciyaaraha Shax-miiseedka ee Israa'iil ayaa ku eedeeyey Sacuudiga in ay xiriirka ciyaarahan ku marin habaabiyeen arrinta, si loogu ogolaado in ay marti geliyaan.
Anna Muzychuk, oo 27-jir ah oo u dhalatay dalka Ukraine, waxay tiri: "Inkastoo aan dhaqaale ka helayo, haddana uma socdo in aan Riyaadh ku ciyaaro", xitaa haddii ay ku wayneyso labada goor ee ay ku guuleysatay.
6 Juunyo 2017